RT-qPCR Series Suppliers kanye Factory |China RT-qPCR Series Abakhiqizi
I-RT-qPCR Easyᵀᴹ (Isinyathelo esisodwa)-SYBR Green I
◮Ikhithi yesinyathelo esisodwa yenza ukuloba okuhlanekezelwe kanye ne-qPCR ukusabela okubili kushubhu efanayo, idinga kuphela ukwengeza ithempulethi i-RNA, iziqalo ezithile ze-PCR kanye ne-RNase-Free ddH.2O.
◮Ikhithi ingahlaziya ngokushesha nangempumelelo i-RNA yegciwane noma ilandele i-RNA.
◮I-RT-qPCR EasyTM(One Step) -SYBR Green I kit iza nodayi wereferensi wangaphakathi we-ROX, ongasetshenziswa ukuqeda ingemuva lesignali namaphutha esignali phakathi kwemithombo, okulula ukuthi amakhasimende ayisebenzise kumamodeli ahlukene wezinsimbi ze-PCR zomthamo.
I-RT-qPCR Easyᵀᴹ (Isinyathelo Esisodwa)-Taqman
- One-Ikhithi yesinyathelo inika amandla ukuloba okuhlanekezelwe kanye ne-PCR ukuthi kwenziwe ngeshubhu efanayo, kudingeka kuphela ukwengeza ithempulethi i-RNA, iziqalo ezithile ze-PCR kanye ne-RNase-Free ddH2O.
- Ukuhlaziywa kobuningi besikhathi sangempela kwe-RNA yegciwane noma ukulandelela i-RNA kungenziwa ngokushesha nangokunembile.
- Ikhithi isebenzisa i-Foregene reverse transcription reagent eyingqayizivele kanye ne-Foregene HotStar Taq DNA Polymerase ehlanganiswe nesistimu yokusabela eyingqayizivele ukuze kuthuthukiswe ngempumelelo ukukhulisa amandla kanye nokucaciswa kokusabela.
- Isistimu yokusabela ethuthukisiwe yenza ukusabela kube nokuzwela okuphezulu kokutholwa, ukuqina okushisayo okuqinile, nokubekezelelana okungcono.
- RT-qPCR EasyTM(One Isinyathelo) -Ikhithi ye-Taqman iza nodayi wereferensi wangaphakathi we-ROX, ongasetshenziswa ukuqeda ingemuva lesignali namaphutha esignali phakathi kwemithombo, elungele abasebenzisi bokugcina ukuyisebenzisa kumamodeli ahlukene wamathuluzi e-PCR amaningi.